Iguqula Ubuntu 12.10 ibe yi-multimedia authoring distro | Kusuka kuLinux
Njengoba ngishilo kokuthunyelwe kwangaphambilini, i-multimedia distros ifaka isoftware eningi engadingi ukuthi isithakazelise, ngakho-ke lapho sisebenze nabanye babo izinyanga ezimbalwa siyabona ukuthi asidingi okungaka.
Kulokhu okuthunyelwe ngizoxoxa ngezinyathelo ezibalulekile zokulungiselela ukufakwa okuhlanzekile kwe-Ubuntu 12.10 futhi ngikulungiselele ukusebenza nezinhlelo zokusebenza zomsindo okufanele ngabe usuzazi.
1 Kungani Ubuntu?
2 Izindawo zokugcina ze-KxStudio
3 Umsebenzisi wokudalwa komsindo
4 Okubaluleke kakhulu kwimemori
5 Gada ukusebenza kwe-CPU
Isizathu sokuqala nguwe. Njengamanje ngineqembu lokuhlola kuphela, eligcina i-AvLinux 6 (ngenxa yokuba neDebian ihlala iseduze), neqembu lami lomsebenzi. Ngommeleli, ungakwenza ngeSlackware, njengoba kuchaziwe kule vidiyo.
Lowo obhala lapha ukhululekile kakhulu nge-Ubuntu ne-Unity, kepha ukhululekile ukusebenzisa noma yikuphi okuhlukile kwalokhu ngemvelo elula yokuqhafaza. I-LXDE noma i-XFCE muhle kakhulu, kepha ngincamela ukunikela ngokusebenza okuncane kwalo mshini (kusasebenza kuphela ukuze kusetshenziswe) ukuze ngithole izinzuzo ezithile ezenezelwa yi-Unity endleleni engisebenza ngayo. Ngakolunye uhlangothi, ukusebenza ngaphansi kwe-Ubuntu kwenza kube lula ngathi ukuthi sikwazi ukufinyelela ezinqolobaneni eziningi kanye / noma ama-PPA ngezicelo eziningi "zokopha". Nansi ke inkinga, zingane. "Okusha" kuhlala kubiza kakhulu maqondana nokuzinza. Kufanele ngikutshele ngezindaba, kepha awudingi ukuzisebenzisa. Ngifuna ukukucacisa nje ukuthi ungasebenzisa i-Ubuntu 12.04 LTS (noma enye i-distro) bese uzama ukugwema izinqolobane zokuhlola, lapho uzofinyelela khona indawo yokukhiqiza ephephile futhi ezinzile. Ngizoba manzi, ngoba nakhu sikhona ngaphandle kwamagwala ...
Ngaphandle kwalokhu, isitatimende sami senhloso, ngingumuntu odidekile waseDebian, ngakho-ke ngokukhishwa kukaDebian Wheezy ngizolungisa konke kule distro ngokushesha nje lapho sengineqembu elifanele.
Izindawo zokugcina ze-KxStudio
http://kxstudio.sourceforge.net/KXStudio:Repositories Kulezi zindawo zokugcina izinto sizothola inombolo enkulu kakhulu yezinhlelo zokusebenza nezinsiza ze-multimedia ze-GNU / Linux. Ngokuvakashela leli khasi uzobona ukuthi zihleleke kahle kakhulu, ngakho-ke singangeza isoftware entsha sha futhi engazinzile, abashayeli, izinhlamvu, izibuyekezo ... Konke ngentando.
Uma ungabasebenzisi be-Ubuntu uzokwazi vele ukuthi i-PPA ingangeniswa kusuka ku-terminal ngomyalo:
i-sudo engeza-apt-repository ppa: kxstudio-team / ppa
Uma ungaphezulu kohlobo "lokuvilapha" uzosebenzisa i- "Software Origins" (efinyeleleka kusuka ku-DASH noma kwi-Software Center).
Futhi sizoba nesamba esihle sesoftware ebesivele sikhulume ngayo. 😉
Umsebenzisi wokudalwa komsindo
Umsebenzisi wesistimu yakho kufanele abe seqenjini "lomsindo". Ukwazi ukuthi ukuyo noma cha:
amaqembu "igama lomsebenzisi"
Ukuzengeza eqenjini le- «audio»:
I-sudo usermod -a -G yomsindo "igama lomsebenzisi"
Okubaluleke kakhulu kwimemori
Yize kufanele ukuthi kube yinkinga encane noma engekho nhlobo namuhla, akulimazi ukuzama ukugwema izinkinga ngokubeka imingcele ethile yobulwane. Ku-Ubuntu kunamafayela amabili okungenzeka: 'Limits.conf' ne 'audio.conf', ongawahlela njengabaphathi abavela esigungwini nge- "nano" noma imidwebo ene- "gedit" (lokhu okulandelayo kungcono ukwethula nge-gksu esikhundleni se- Sudo).
Kuleli fayela okukhulunywa ngalo kufanele ungeze imigqa elandelayo (njengoba injalo, ngaphandle kwamathebhu olayini asevele ekhona kufayela).
@nomfundo - nomfundo 95
@nomfundo - memlock unlimited
Ekugcineni, ungabheka lokho okubaluleke kakhulu "realtime" = 95 ngomyalo olandelayo:
ulimi -r -l
Nakhu ukuphela kokuphela 'kwemingcele.conf' yami kubukeka kanjena
Gada ukusebenza kwe-CPU
Lo bekungumyalezo u-Ardor anginike wona izinyanga ngaze ngathola. Ngama-laptops kungaphezu kokujwayelekile, yize kungakaze kungidalele izinkinga (noma okungenani angikakuboni). Incazelo ephelele iku- I-Debian Wiki, kepha sinentshisekelo yokwenza imishini esifuna ukuyinikezela emsebenzini womsindo ngamandla aphelele. Into yokuqala kuzoba ukufaka iphakheji 'cpufrequtils':
sudo apt-get ukufaka cpufrequtils
Ngokuvamile, ama-CPU / s azosebenza ku- "ondemand" (ukusebenza okuphezulu noma okuphansi uma kudingeka). Singayibona sisebenzisa umyalo 'cpufreq-info'. Uma kwenzeka okokusebenza kungekho "ekusebenzeni" (ukusebenza), sizokwakha ifayela lokumisa ukuze lilayishe ekuqaleni futhi liphathe i-CPU:
Ifayela esizonamathisela kulo imigqa elandelayo:
Amanani angu- # avumelekile: abasebenzisi besikhala sokulondolozwa kwamandla okulondolozwa kokusebenza kokudingekayo
# bathole kusuka kukati / sys / amadivayisi / uhlelo / cpu / cpu0 / cpufreq / ukukala_abatholakali_abaphathi
UMBUSI = "ukusebenza"
Uhlelo selulungile. Into elandelayo kuzoba ukufaka iseva yomsindo nezinhlelo eziyisisekelo (ngaphezu kwezinkinga ezithile ezingaba khona ngamakhadi ahluke kakhulu, i-USB noma i-firewire ...) kepha leyo enye indaba. 😉
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Guqula Ubuntu 12.10 ube yi-multimedia authoring distro
Lokho kungaphezu kwami… usuyifundile yonke i-debian wiki athikili? Ungakwazi ukunika amandla / ukukhubaza i-freqscaling ku-BIOS futhi kungenzeka ikhutshazwe, noma ungahle ungadingi ukwenza lesi sinyathelo.
Ngisanda kufaka i-Ubuntu Studio 12.10, futhi ngangeza ama-3 ezinqolobane ze-KXStudio (Main, Plugins and Music), futhi okwamanje inani lamaphakeji abawanikezayo liheha impela (kufaka ne-3 entsha: D ardor)
Ubuntu Studio iyindawo enhle kakhulu. Esiteshini sami se-YouTube kunama-screencast amaningi enziwe naye. Ngiyekile ukuyisebenzisa ngoba bengingadingi isoftware eningi, futhi noma iXFCE iyindawo enhle, ngikhululeke kakhulu ebumbeni, ngakho-ke nami benginakho okuningi.
Sawubona: I-cpufrequtils kubonakala ngathi ayisebenzi ne-AMD 8150 CPU ku-Ubuntu 12.10.
Umlayezo olandelayo uvela: »kuhlaziywa i-CPU 0:
akukho noma umshayeli we-cpufreq ongaziwa uyasebenza kule CPU
ukubambezeleka kokushintshwa okuphezulu: 4294.55 ms. »Ukuphendula umyalo» cpufreq-info «